Thermomix na MyCook | Usoro ọgwụgwọ
Kedu robot ịzụta? Thermomix ka ọ bụ MyCook? Anyị ga-enyocha ma tulee njirimara bụ isi nke ụdị abụọ nke robot abụọ ahụ iji nyere gị aka mkpebi a: Thermomix TM31 na MyCook.
Anyị ga-amalite na isi ihe anọ dị iche na njirimara nwere ike ikpebi nhọrọ anyị: ọnụahịa, usoro kpo oku na ọnọdụ okpomọkụ, onye nrụpụta na ụdị nzụta.
Thermomix ka mma ma ọ bụ MyCook?
Dị ka anyị pụrụ ịhụ, MyCook bụ mkpokọta € 200 dị ọnụ ala karịa TMX. N'ebe a, anyị na-egosipụta ọnụahịa gọọmentị, n'agbanyeghị na n'ezie ụdị abụọ a ga-enye onyinye ha iji dọta ndị na-azụ ahịa. Ọ bụ ezie na MyCook nwere ike belata ọnụahịa ya n'oge ụfọdụ n'afọ, Thermomix nwere ike inye ndị ahịa nhọrọ dịka ego na-enweghị ọmụrụ nwa, akwụkwọ nri, akpa njem ma ọ bụ iko 2 maka ọnụahịa otu.
Usoro kpo oku na ọnọdụ okpomọkụ
MyCook: Itinye n'ọkwa (40º - 120º)
Ozuomoku: Nguzogide (37º - 100º)
Usoro nri bụ otu n’ime nnukwu ọdịiche dị na rọbọt abụọ a. N'oge a, MyCook jisiri ike karịa Thermomix ebe ọ bụ na usoro ikpo ọkụ ya bụ ntinye, usoro ọgbara ọhụrụ na ngwa ngwa, yana ọnọdụ okpomọkụ sitere na 40º ruo 120º. Agbanyeghị, Thermomix na-ekpo ọkụ site na nguzogide, usoro omenala na nwayọ nwayọ na ọnọdụ okpomọkụ ya dị n'etiti 37º na 100º. Ya mere, anyị nwere ike ikwu na MC na-ekpo ọkụ ihe dị ka nkeji 2-4 karịa TMX, na-adabere na ọnụọgụ nke ọdịnaya ka ewe iwe.
N’ịtụle ngbanwe ihu igwe anyị na-ahụ na Thermomix ruru 37º dị ka isi okwu, ọnọdụ dị oke mkpa maka ịmịcha ndị ọcha na ịkwa ọcha, yana ime ntụ ọka. Agbanyeghị, MyCook ruru 120º, ogo zuru oke maka ighe-eghe, mgbe Thermomix enweghị ike ịkarị 100º.
MyCook: Kpọtụrụ zụrụ ahịa na ngwa ahịa.
Ozuomoku: n'ụlọ n'ụlọ site na ndị ọrụ ngosi Thermomix.
N'ebe a, anyị na-ahụ otu n'ime nnukwu ọdịiche dị n'etiti ígwè ọrụ ntanetị. Iji nweta TMX anyị ga-eme ya site na ndị na-eweta ihe ngosi bụ ndị ga-abịa n'ụlọ anyị na-enweghị nkwa ọ bụla, ha ga-akụziri anyị igwe ahụ n'ụzọ nkeonwe n'ihe dị ka awa 2 ma ọ bụ 3 ma anyị ga-esi nri ọtụtụ efere ọnụ, na mgbakwunye na ịjụ ụdị ọ bụla doro anya na anyị nwere banyere ya robot. MyCook, n'aka nke ọzọ, enwere ike zụrụ n'ụlọ ahịa ngwa ahịa ọ bụla, si otú a na-ewepụ mkpa ọ dị onye ọ bụla ịbịa n'ụlọ gị. Ihe na-ezighi ezi ebe a bu na anyi agaghi enwe ohere ihu otu MyCook si aru oru.
Ozuomoku: Vorwerk - Naịjirịa.
MyCook bụ ụlọ ọrụ Catalan a ma ama bụ Taurus, nke nwere afọ 52 nke ahụmịhe na okike na imepụta obere ngwa ngwa ụlọ na obere maka ụlọ. Thermomix bụ ụlọ ọrụ German Vorwerk rụpụtara, yana afọ 120 nke ahụmịhe na-emepe emepe ngwaahịa abụọ: Kobold agụụ nhicha na robot kichin Thermomix. N'ebe a, anyị nwere isi ihe abụọ iji nyochaa: ma zụta n'aka ụlọ ọrụ Spanish, nke n'oge nsogbu bụ ihe ndị mmadụ ji kpọrọ ihe ka ego wee dịrị na mba anyị, ma ọ bụ họrọ itinye ego na aha ọma nke teknụzụ German.
Ugbu a, ka anyị nyochaa njirimara na esemokwu ndị ọzọ na-adọrọ mmasị na esemokwu dị n'etiti robots:
Redgba ọsọ ọsọ
Udiri nke Thermomix
MyCook: Ntughari 11.000 kwa nkeji.
Ozuomoku: Ntughari 10.200 kwa nkeji.
Ọ bụ ezie na anyị lee ya anya nke mbụ, anyị hụrụ na MyCook karịrị Thermomix na mgbanwe, ọ dị ka nke a anaghị anọchite anya ọghọm ọ bụla maka robot German. Ihe ga-ekpebi ogo nke ikwo ihe bụ ọdịdị nke iko ahụ. MyCook iko ahụ dị warara na ntọala ma toro ogologo. Thermomix, nke nwere ụdị okike ya na nke mbụ ya (TM21), mezigharị ya na nhazi nke ụdị nke ugbu a site n'ime ka efere saa mbara na isi na ala, na-enweta nri na-arụ ọrụ nke ọma na nke ọma.
Nkezi oge ha
Ozuomoku: Afọ 15.
Mycook anọwo na ahịa ruo afọ ole na ole ma e jiri ya tụnyere Thermomix, n'ihi ya, anyị enweghị ihe ga-ezuru m iji chọpụta nkezi oge Mycook. Agbanyeghị, anyị maara na Thermomix nwere ike inwe a nkezi oge ihe dị ka afọ 15.
Ibu ibu na akụkụ
MyCook: Ogwe 10 (360 x 300 x 290 mm)
Ozuomoku: Ogwe 6 (300 x 285 x 285 mm)
Anyị na-ahụ na Thermomix dị ọkụ ma pere mpe karịa MyCook, atụmatụ na-echebara maka kichin pere mpe.
Ọ na-eri ọtụtụ ihe iji kpochaa Thermomix ahụ?
MyCook: Kpachara anya mgbe ị na-asa ahịhịa n'ihi na ha anaghị abanye n'ime mmiri.
Ozuomoku: ngwa niile bụ asacha efere mma ma submersible na mmiri.
Abịa na ịsa, Thermomix doro anya na-enweta nkwanye. Malite na nhazi nke mkpuchi ahụ, anyị nwere ike ịsị na MyCook nwere ụfọdụ ọkwa iji kwado ọdịda nri n'oge igweri na nnukwu ọsọ nke na-eme ka nhicha dị ntakịrị karịa ebe ọ na-agba ọtụtụ mgbe mmiri na-ada kpọmkwem na mgbata mmiri. Ọzọkwa, agụba ndị na-adịghị asacha efere mma. Njirimara ndị a dị na Thermomix Model (TM21) gara aga wee mepụta na 2004 na ụdị ọhụrụ na nke ugbu a nke dị n'ahịa: enwere ike ịmịcha akpịrị na-enweghị nsogbu na asacha efere ma mkpuchi ahụ dị ezigbo mma.
MyCook: nke nkiti.
Ozuomoku: ahaziri anya site na onye nnabata na nnweta nnwere onwe maka ọtụtụ usoro nri.
Na MyCook, ọrụ ahịa mgbe erechara ahịa yiri nke ngwaọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ daa ma ọ bụ ịchọrọ nnọchi, kpọtụrụ ha ma gaa na etiti kwesịrị ekwesị. Agbanyeghị, Thermomix na-arụ ọrụ dị iche iche. Eziokwu nke ịkwụ ụgwọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1.000 euro na ịzụta site n'aka onye na-eweta ihe, nwere ụgwọ ọrụ ya. Onye na - eweta ihe a ga - abụ onye anyị ga - azụ ahịa ga - ahaziri anyị mkpa anyị. N'aka ozo, oburu na anyi nwere nsogbu na igwe ma obu obi abuo obula banyere uzommeputa obula, anyi nwere ike ịkpọtụrụ ya ozugbo ma o gakwara anyi n'onwe ya, o gha abia n'ulo anyi ime ihe nlere nke anyi na emegide. Na mgbakwunye, ndị nnọchi anya Thermomix na-eme nkuzi nri n'efu n'efu na isiokwu dịgasị iche iche maka ndị ahịa Thermomix na ndị ndị na-eweta anyị nwere ike ịkpọ anyị.
Ka anyị hụ àgwà ndị a na ntụle na-esonụ
Ahịa 799 € 980 €
Usoro okpomọkụ Itinye n'ọkwa (heats ngwa ngwa) Ndị na-eguzogide
Ntughari kwa nkeji 11.000 10.200
Nhicha Ndị na-anaghị asacha efere mma Ee efere efere
Okpomọkụ Nke ato-nke-anọ Nke ato-nke-anọ
Ike 2 lita 2 lita
Ihe X x 360 300 290 mm X x 300 285 285 mm
Ibu ibu 10 kg 6 kg
Ofdị zuo Na-echekwa Site na ndị na - eweta ihe ngosi n’ụlọ
Ụlọ ọrụ Taurus (Spanish) Vorwerk (Germany)
Kedu robot kichin ịzụrụ?
Anyi aghaghi ibido site n'ikwu na ha bu igwe ndi yiri ya, ma na njirimara ha na oru ha na ngwa ha, ya mere, ma anyi choro otu ma obu nke ozo, anyi ga enweta ezigbo robot nke ga enyere anyi aka otutu na kichin.
Mydị MyCook dị ugbu a yiri nke TM21, nke e mepụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 gara aga, ya mere o nwere atụmatụ ndị ka mma na ụdị Thermomix dị ugbu a (TM31): nhụjuanya nke nnukwu efere ahụ na isi nke na-eme ka egweri sie ike karị, akụrụngwa buru ibu karị, ọkwa ndị dị na mkpuchi ahụ na-eme ka o sie ike ịsacha na enweghị okpomọkụ nke 37º nke bara ezigbo uru maka ịme mgwakota agwa na akwa na-agbanwe. N'ikpeazụ, na aka, àgwà nke plastic ihe nke iko na Ngwa ngwa Thermomix dị ka nke ka mma karịa MyCook.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị na MyCook nwere ihu ọma nke kpo oku site na ntinye na 120º nke okpomọkụ, Thermomix ka bụ robot ọtụtụ afọ nke ahụmahụ (na, ya mere, ọ na-enwe ntụkwasị obi ka ukwuu), ịsachasị ngwa ngwa nke ngwa ya, ọrụ na-ere ahịa mgbe a na-akwụ ụgwọ euro 200 dị ntakịrị nke ịkwụ ụgwọ na arụmọrụ ka ukwuu na-egweri na isi nri n'ihi nhazi kacha mma nke iko ahụ sara mbara ke ukot.
Ozi ndi ozo banyere Thermomix
Ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ndị ọzọ gbasara ihe oriri na-enye nri na Thermomix, M nwere ike ikwu ka ị banye na ngalaba Gịnị bụ Thermomix?